ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် သင့်အားကယ်တင်ဖို့ ယေရှု ကြွလာ – New Dream Media Ministry Inc
ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်အသက်ရှင်သန်မှုတိုင်းမှာ ကျောင်းတက်တဲ့ အခါမှာဖြစ်ဖြစ်၊ ကစားတဲ့အခါမှာဖြစ်စေ၊ အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်၊ ကျွန်တော်တို့လုပ်ဆောင်မှုတွေအပေါ်မှာ ဆုံးဖြတ်၊ စီရင်ကြလေ့ရှိပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာတော့ အလုပ်နှင့်ပတ်သက်ရင် သူတို့ခံယူချက်ကတော့ ”အားသွန်ခွန်စိုက်လုပ်ရမယ်။ ချွေးထွက်ရမယ်။ ပြိုင်ဆိုင်ရမယ်။” အဲသလို ခံယူကြတယ်။ အဲဒီခံယူချက်တွေနှင့် ကြီးထွားလာတဲ့လူတွေ၊ အမေရိကန် နိုင်ငံသားတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာ အခမဲ့ဆိုတာမရှိ။ မင်းလုပ်သလောက်ရရမယ်။ တစ်ခုခုလိုချင်ရင် … လုပ်ပါ။ ပေးဆပ်ရမယ်။ အဲသလို ကိုယ့်ဟာကိုယ် ကြိုးစားမှပဲ ဘုရားသခင်ကလည်း ကူညီမယ်လို့ သူတို့ခံယူကြတယ်။
အဲသလိုခံယူကြတော့ … ဝိဉာဉ်ရေးရာမှာလည်း အဲဒီလို သူတို့ တွေးခေါ်လာကြတယ်။ ကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်စားနိုင်ဖို့အတွက် ထိုက်တန် ၏။ မတန်၏ဆို့တဲ့ ဘုရားသခင်ရဲ့အတည်ပြုမှု၊ စံ လိုလာမယ်လို့ တွေးဆ လာကြတယ်။ ဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ရယူပိုင်သင့်၊ ပိုင်ထိုက်၊ မထိုက်ဟာ လူ့ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုကို ကြည့်လာကြတယ်။ စာဖတ်သူ ကိုယ်တိုင်လည်း အကျင့်ကိုအားကိုးပြီး၊ အဲသလိုတွေးနေခဲ့ရင် … ခင်ဗျား အတွက် သတင်းကောင်းတစ်ခုပေးပါရစေ။ ကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့ ခင်ဗျား လုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာကို ကျမ်းစာကဒီလိုပြောထားပါတယ်။
”ထိုသူတို့ကလည်း ဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့် ညီသော အကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းငှါ အဘယ်သို့ပြုရပါ မည်နည်းဟု မေးလျှောက်ကြ၏။ ယေရှုကလည်း ဘုရားသခင်စေလွှတ်တော်မူသောသူကို ယုံကြည်ခြင်း အကျင့်ကား၊ အလိုတော်နှင့်ညီသောအကျင့်တည်းဟု မိန့်တော်မူ၏” ရှင်ယောဟန် ၆း၂၈-၂၉
ကယ်တင်ခြင်းဆိုတာကို ဒီကျမ်းပိုဒ်မှာ ရှင်းထားပါတယ်။ ကယ်တင်ခြင်းဟာ ကြိုးစားအားထုတ်မှု (trying) မဟုတ်၊ ယုံကြည်လိုက် ခြင်း (trusting) ဖြစ်ပါတယ်။ ကယ်တင်ခြင်းဆိုတာ ခင်ဗျားရသင့်တာကို သက်သေပြပြီး ရယူတဲ့အရာမဟုတ်၊ မရထိုက်မှန်းသိပေမယ့်၊ သူကပေးတဲ့ အတွက် ယုံကြည်စွာလက်ခံခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ ကယ်တင်ခြင်းဟာ ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ရတဲ့ အရာပါ။ ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာ တခြားသောဘာသာတရားများအတွက် အင်မတန်မှ နားလည်ရခက်ပြီး၊ ထူးဆန်းနေတတ်ပါတယ်။ ကျမ်းစာမှာ လည်း ကယ်တင်ခြင်းဟာ အခမဲ့ ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်သာလို့ ပြောတဲ့ အခါမှာ တခိုျ့က ပါးစပ်အဟောင်းသားနှင့်အံ့သြကြပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေကတော့ … အကန့်အသတ်ရှိတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် သိပ်ကိုရင်းနှီးကြတာပါ။ မင်း ငါ့ကိုချစ်ရင်၊ မင်းကိုငါချစ်မယ်ဆိုတဲ့ အချစ်မိုျးနှင့်ချစ်ကြတာ။ အဲဒါ အင်္ဂလိပ်လို I will love you if… တဲ့။ ဒါပေမယ့် ဘုရားရဲ့အချစ်မှာတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းကိုငါချစ်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မင်းကိုငါချစ်လို့ပဲ တဲ့။ I love you because … တဲ့။ အကန့်အသတ်မရှိတဲ့ချစ်ခြင်းပါ။ အဲသလိုအချစ်မိုျးက ကျွန်တော်တို့အတွက်ထူးဆန်းပြီး၊ လက်ခံရခက်နေ ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ စာဖတ်သူကို ဘာသာတရားအကြောင်းအနည်းငယ် ရှင်းချင်ပါတယ်။ ျွနူငါငသည ဆိုတဲ့ ဘာသာတရားဆိုတာဟာ ဘုရားသခင် ကျေနပ်အောင်လူတွေရဲ့လုပ်ဆောင်မှု၊ ဘုရားကိုရှာဖွေခြင်းပါ။ အဲဒါ ကြောင့် ဘာသာတရားတိုင်းမှာ ”လုပ်ပါ” ဆိုတဲ့စကားကပါလာပါတယ်။ ဘုရားကျေနပ်အောင်လုပ်ဆောင်ရမယ်။ အဲသလိုရှိတဲ့အခါမှာလည်း ဘာသာတရားတိုင်းမှာ သူတို့ဘာသာတခုစီရဲ့ ထူးခြားမှုတွေလည်း ရှိနေ ပါတယ်။ ထူးခြားတဲ့စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းတွေရှိနေပါတယ်။ လေ့လာ ကြည့်ရင် အဲဒီအရာတွေဟာ တခုနှင့်တခု ဆန့်ကျင်နေတာလည်း တွေ့ပါ လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် သေချာတဲ့အရာနှင့် အကြီးမားဆုံးအတွေးအခေါ် ကတော့ … ဘုရားသခင်ကသင့်ကိုချစ်ဖို့ ခင်ဗျားသူ့ကို ဆက်ကပ် အစေခံ ရမယ်။ အလုပ်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ရမယ်။ ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းအောင် နေရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီအခါမှာ ဘုရားသခင်ဟာ သားတော်ယေရှုအပြစ် နှင့် လောကကိုဆင်းြွကလာပြီး ”မင်းတို့လောကသားတွေမှားကုန်ကြပြီ။ ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်တာဟုတ်ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် … အဲသလိုလုပ်လို့ မင်းတို့အပေါ် ငါရဲ့အချစ်က မပိုလာသလို၊ မလျှော့ပါဘူး။ မင်းတို့အပေါ်ထားတဲ့ငါ့အချစ်ဟာ အကန့်အသတ်မဲ့ပါ။ အခြေအနေပေါ် မူတည်တဲ့အချစ်မဟုတ်ပါ။ မပြောင်းလဲတဲ့အချစ်ပါ။ အဲဒီတော့ မင်းတို့ အတွေးမှားကိုထားပြီး … အသစ်သောအတွေးကို ငါမင်းတို့ကို သင်ကြား ပေးပါရစေ။ အဲဒါက ကျေးဇူးတော်ပါ။ အဲဒီအတွက် မင်းတို့ မပေးဆပ် နိုင်ဘူး။ လုပ်ဆောင်လို့လည်းမရပါ။ အဲဒီကျေးဇူးတော်ခံစားရဖို့လည်း သင်တို့မကောင်းနိုင်ပါ။ ငါ့အဖို့တော့ ခက်ခဲစွာထမ်းဆောင်ရမယ့် တန်ဖိုး ကြီးတဲ့ဆုဖြစ်ပြီး၊ မင်းတို့အတွက် အခမဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ မင်းတို့ အတွက် ငါလုပ်ဆောင်ခဲ့သမျှ၊ မင်းတို့အပေါ်လုပ်သမျှ၊ မင်းတို့အားဖြင့် လုပ်သမျှ၊ မင်းတို့ခံစားသမျှကောင်းကြီးတွေဟာ ငါ့ရဲ့ကျေးဇူးတော်အား ဖြင့် ငါပေးတဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ မင်းတို့အားလုံးအတွက် ငါပြုလုပ် ခဲ့ပြီ” လို့ ပြောကြားဖို့လောကကို ဆင်းြွကလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ ဒီမှာထပ်နားလည်ရမှာက ဘာသာတရားက ကယ်တင် ခြင်းရနိုင်ဖို့အတွက် လုပ်ဆောင်ရမယ်လို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာ သခင်ယေရှု ကတော့ ”မင်းတို့ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ ငါလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီ” တဲ့။ သခင်ယေရှု ခရစ်ဟာ စာဖတ်သူနှင့် ကျွန်တော့်အတွက် လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်မှာ အသေခံတော်မူတဲ့အခါမှာ “ှုအ ငျ ်ငညငျ့နိ” ”ဤအမှုပြီးပြီ” လို့ေြွကးကြော် ခဲ့ပါတယ်။ ဒီစကားလုံးကို သေချာနားလည်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ”ငါအမှု ပြီးပြီ” လို့ ယေရှုမအော်ခဲ့ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ သူ့မှာ လုပ်ဆောင်ရမှာ ရှိသေးတယ်။ သေပြီးသုံးရက်မှာ သူအသက်ရှင်ပြန် ထမြောက်တော်မူပါတယ်။ သေခြင်းမှထမြောက်ပြီး၊ ယေရှုစလင်မြို့နား တဝိုက်မှာ ရက်ပေါင်းလေးဆယ် သွားလာကျင်လည်ခဲ့ပါတယ်။ လူတွေနှင့် ဆုံခဲ့တယ်။ ပြီးမှ ကောင်းကင်ကို ပြန်ြွကသွားပါတယ်။
ဒီတော့…. ဘယ်အရာ ပြီးမြောက်သွားတာလဲ။ ှုအ ငျ ်ငညငျ့နိ လို့ ေြွကးကြော်တာ ဘယ်အရာပါလိမ့်။ အဖြေကတော့ … စာဖတ်သူနှင့် ကျွန်တော်ရဲ့ ကယ်တင်ခြင်းခံရဖို့ … သူပေးဆပ်ရမယ့်အရာ …. အမှုကို ပြီးသွားပြီလို့ ေြွကးကြော်တာပါ။ တကယ်တော့ သခင်ယေရှုေြွကးကြော် တဲ့စကားလုံးက ဟေဗြဲစကားမှာ စကားတစ်လုံးတည်းပါ။ ဘာနှင့်တူသလဲ ဆိုတော့ ပစ္စည်းတွေ၊ အခွန်တွေဆောင်စရာရှိလို့ ဆောင်ပြီးတဲ့အခါမှာ ပြေစာပေါ်မှာ ”ပေးပြီး” လို့ ရေးပေးသလို၊ ထောင်ကျတဲ့လူက အချိန်စေ့ လို့ ပြန်လွတ်ရမယ့်အချိန်ကို သူ့အတွက် ”ပြီးပြီ” ”အမှုပြီးပြီ” လို့ ရေးပေး သလိုမိုျး။ သခင်ယေရှုက ကျွန်တော်တို့ အပြစ်အတွက် အသေခံပေးလိုက် တာပါ။
ဒီတော့ ဒီမှာတွေ့ရတာက၊ ဘာသာတရားကတော့ ကယ်တင် ခြင်းရဖို့ ”ကျင့်ပါ” ”လုပ်ဆောင်ပါ” လို့ ပြောနေတဲ့အချိန်မှာ ယေရှုခရစ် ကတော့ ”ပြီးပြီ” တဲ့။ ခင်ဗျား ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ သူပေးဆပ်ပြီးပါပြီ။
နှစ်အတော်ကြာတုန်းက၊ လူတစ်ယောက်က စာရေးသူ ကျွန်တော့်ကို မေးပါတယ်။ ”ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ ကျွန်တော် ဘာလုပ်ရမလဲ” တဲ့။ ကျွန်တော် သူ့ကိုစိုးရိမ်အောင်လို့ ”ခင်ဗျားနောက်ကျ ပါပြီ” လို့ပြောတဲ့အခါ သူအတော်ကြောင်သွားတယ်။ သူမမျှော်လင့်တဲ့ အဖြေရတော့ ”ခင်ဗျားဘာလို့အဲလိုပြောတာလဲ။ ဘာကိုဆိုတာလဲ။ ကျွန် တော် တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ အရမ်းနောက်ကျနေလို့လားဗျာ” ဆိုပြီး ကျွန်တော့် ကို ပြန်မေးတယ်ဗျ။
”လုပ်ဆောင်ရမယ့် အရာအားလုံး လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ် နှစ်ထောင် တုန်းက သခင်ယေရှုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါပြီ။ ခင်ဗျားလုပ်ဆောင်ရမှာက၊ သူ လုပ်ဆောင်ပြီးခဲ့တဲ့အရာကို လက်ခံပြီး၊ နေလိုက်ရုံပါ။ ဘာမှထပ်လုပ်စရာ မလိုပါဘူး။ ကျေးဇူးတော်သက်သက်၊ ရေမရောတဲ့ ကျေးဇူးတော်ပါပဲ” လို့ ကျွန်တော် သူ့ကို ပြန်ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။
”ယုံကြည်သောအားဖြင့် ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ကယ်တင်ခြင်း သို့ ရောက်ရ၏။ ကိုယ်အလိုအလျောက်ရောက်သည် မဟုတ်။ ဘုရားသခင် သနားတော်မူရာ ဖြစ်သတည်း။
ကိုယ်ကုသိုလ်ကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်သည်မဟုတ်။ သို့ဖြစ်၍ အဘယ်သူမျှ ဝါြွကားစရာ အခွင့်မရှိ” လို့ ပြောထား ပါတယ်။
ဒီတော့ စာဖတ်သူ သတိပြုပါ။ ဘုရားသခင်ဆီကလာတဲ့ ခရစ္စမတ်လက်ဆောင်ဟာ ကျေးဇူးတော်နှင့် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာ ရရှိတဲ့ လက်ဆောင် ဖြစ်ပါတယ်။